Sidee Manchester United u aragtaa Tababare Ole Gunnar Solskjaer Marka la eego Xaalada Hada | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Sidee Manchester United u aragtaa Tababare Ole Gunnar Solskjaer Marka la eego...
Madaxda Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ‘ku faraxsan yihiin qaabka kooxda ku socoto iyadoo uu maamulayo tababaraha haatan ee Ole Gunnar Solskjaer .
Red Devils ayaa lagu soo waramayaa inaysan qorsheynin inay ceyriso tababaraha reer Norway inkastoo qaab ciyaareed niyad jab leh uu kooxda u horseeday iyadoo badisay kaliya hal kulan shantii kulan ee ugu dambeysay tartamada oo dhan.
Tababarihii hore ee Chelsea Antonio Conte ayaa loo arkaa inuu yahay kan ugu cadcad inuu bedelo Solskjaer haddii isbedel lagu sameeyo hoggaanka, laakiin sida ay qortay The Sun , Man United ayaa 48-jirka u aragta tababare muddo dheer ah.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda heysata 20-ka jeer horyaalka Ingariiska inay si buuxda uga dambeyso tababarahooda isla markaana ay sii wadi doonaan inay taageeraan iyadoo kooxda ay isku dayeyso inay mar kale ku soo laabato hogaanka Premier League.
Man United ayaa hal dhibic ka qaadatay seddexdii kulan ee ugu dambeysay horyaalka, waxaana ay haatan fadhisaa kaalinta lixaad ee kala sareynta , iyadoo shan dhibcood ka dambeysa kooxda hogaanka heysa ee Chelsea.
Previous articleJuventus 1-0 Roma, Moise Kean oo ka Caawiyay Bianconeri Guusheeda Caawa
Next articleParis Saint-Germain oo Robert Lewandowski Dookha Labaad Marka la eego Erling Braut Haaland
Chelsea oo hakisay Wadahadalada heshiis kordhinta ee Andreas Christensen
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa in ay joojisay wadahadaladii ay kula jirtay Andreas Christensen kaas oo ku saabsanaa heshiis cusub. Ciyaaryahanka heerka caalami ee...
Antonio Conte oo doonaya in uu Gareth Bale ku soo celiyo...
Baarliin oo u jawaabtay Khadiijo Diiriye – Way ogtahay inay dadkeeda...